အချိန်ကောင်းစောင့်ရင်း အောင်မြင်မှု နောက်မကျစေဖို့ – Gentleman Magazine
အခြိနျကောငျးစောငျ့ရငျး အောငျမွငျမှု နောကျမကစြဖေို့
ဘ၀မှာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံမယ့် အချိန်ကောင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်နေမယ်ဆိုရင် အခြားသူတွေ မလိုချင်လို့ထားသွားတဲ့ လက်ကျန်တွေကိုပဲ ရရှိမှာ သေချာပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစိတ်ကူးအိပ်မက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖမ်းဆုပ်ရယူနိုင်ဖို့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်နေမယ့်အစား အခုချက်ချင်းထပြီး ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အချိန်ကောင်းကို စောင့်မနေပဲ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ကြိုးစားကြည့်သင့်တာလဲဆိုတဲ့ အချက် (၅)ခု ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဒီအတိုင်းထိုင်နေရုံနဲ့တော့ လိုချင်တဲ့အရာကို ဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘ၀ ထူးထူးခြားခြား အလှည့်အပြောင်းတွေဖြစ်လာပြီး အားလုံးအဆင်ပြေသွားဖို့ စောင့်နေမယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေ မလိုချင်လို့ ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုပဲ ရရှိမှာပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အခြားဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိပဲ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ တကယ်ဝင်မကစားပဲ ဘေးကရပ်ကြည့်နေသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမရှိခဲ့ရင် ကမ္ဘာပေါ်က စိတ်ကူးကောင်းတွေ၊ စီမံချက်ကောင်းတွေအားလုံးက အလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ ရင်းနှီးစွန့်စားမှုတွေဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါ။
ငြင်းပယ်ခံရမှုတွေ၊ လုပ်ငန်းအတွင်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး သူများမလျှောက်လမ်းကို လျှောက်လှမ်းရတာက တကယ်ကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်၊ သင့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စိတ် နည်းနည်းပဲရှိမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေနည်း ကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရင်းနှီးစွန့်စားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေမှုတွေက ထာဝရရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသာ အဆင်မပြေမှုက အမြဲတည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရင်းနှီးစွန့်စားမှုတွေကို သိပ်အများကြီးတွေးမနေပဲ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၃။ တကယ်လို့ ဆိုတာတွေကြောင့် ရပ်တန့်မသွားပါစေနဲ့။
တကယ်လို့ ငါ ကိုယ်အလေးချိန်မကျရင်
တကယ်လို့ ငါ လုပ်ငန်း မအောင်မြင်ရင်
တကယ်လို့ ငါ ချစ်သလို သူမက ပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်
တကယ်လို့ ငါ စာအရေးအသား မကောင်းဘူးဆိုရင်
တကယ်လို့ ငါ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ မရှင်သန်လာဘူးဆိုရင်
ဒီလိုအတွေးတွေက သင့်ရဲ့ခေါင်းထဲကို အချိန်မရွေးဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို သံသယတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့အချိန်တိုင်း အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး Comfort zone အတွင်းကနေ ရုန်းထွက်ကြတဲ့အခါမှာ ပိုတွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အတွေးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေ ပျက်စီးမခံလိုက်ပါနဲ့။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးတွေ တွေးပေးပါ။
၄။ ဘာအကြောင်းပဲရှိရှိ ရှေ့ဆက်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အရာက ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့သလို ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ ပေါက်တတ်ကရတွေဖြစ်ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သင့်ကို ရူးနေပြီလို့ ပြောလာကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာကို ဂရုစိုက်မလဲ ? တကယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ဘ၀ဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ နောက်ကောက်ကျ ကျန်နေခဲ့ပါစေ၊ အိပ်မက်ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်ဖို့ အလုပ်(၃)ခုလောက် လုပ်နေရပါစေ။ အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့။ ကျဆုံးပြိုလဲမှုတွေကို အောင်မြင်မှုတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားပါ။ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ သံသယတွေ မထားပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေက ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူး။ လစ်လျူရှုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ ရှိတာပါ။
၅။ အတိတ်ကအရိပ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုမှု မခံရပါစေနဲ့။
နောင်တတရားဟာ ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ အဆိုးရွားဆုံး စိတ်ခံစားမှုလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိတဲ့ ရောဂါတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တော့မယ် ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ အရင်က ဘာဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အခုရောမဖြစ်နိုင်ဘူး လားဆိုပြီး လာသတိပေးနေတာက နောင်တပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လက်ရှိအချိန်ကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး အတိတ်မှာပဲ နစ်မျောနေအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ။ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုတာ ပြန်ပြင်ဆင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အနာဂတ်ကိုပဲ ပုံသွင်းလို့ ရတယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ဘ၀ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်က သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခွင့်အလမ်းတွေကို အခုချက်ချင်းပဲ ရယူပါ။ မနက်ဖြန်အထိ စောင့်မနေပါနဲ့။
ဘဝမှာ အားလုံးပွီးပွညျ့စုံမယျ့ အခြိနျကောငျးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ အခြိနျကောငျးကို စောငျ့နမေယျဆိုရငျ အခွားသူတှေ မလိုခငျြလို့ထားသှားတဲ့ လကျကနျြတှကေိုပဲ ရရှိမှာ သခြောပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ စိတျကူးအိပျမကျတဈခုရှိနတေယျဆိုရငျ ဘယျလိုစိတျကူးအိပျမကျမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဖမျးဆုပျရယူနိုငျဖို့ အခြိနျကောငျးကို စောငျ့နမေယျ့အစား အခုခကျြခငျြးထပွီး ကွိုးစားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ အခြိနျကောငျးကို စောငျ့မနပေဲ တဈကွိမျတဈခါလောကျ ကွိုးစားကွညျ့သငျ့တာလဲဆိုတဲ့ အခကျြ (၅)ခု ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဒီအတိုငျးထိုငျနရေုံနဲ့တော့ လိုခငျြတဲ့အရာကို ဘယျတော့မှပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဘ၀ ထူးထူးခွားခွား အလှညျ့အပွောငျးတှဖွေဈလာပွီး အားလုံးအဆငျပွသှေားဖို့ စောငျ့နမေယျဆိုရငျ တခွားသူတှေ မလိုခငျြလို့ ခနျြထားရဈခဲ့တဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေိုပဲ ရရှိမှာပါ။ သငျ့ရဲ့အိပျမကျတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ အခွားဘယျအရာပဲဖွဈဖွဈ သငျကိုယျတိုငျကွိုးစားအားထုတျမှုမရှိပဲ ရယူပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘ၀ပွိုငျပှဲအတှငျးမှာ တကယျဝငျမကစားပဲ ဘေးကရပျကွညျ့နသေလို ဖွဈနမှောပါ။ တကယျလကျတှလေု့ပျဆောငျမှုမရှိခဲ့ရငျ ကမ်ဘာပျေါက စိတျကူးကောငျးတှေ၊ စီမံခကျြကောငျးတှအေားလုံးက အလကားဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
၂။ ရငျးနှီးစှနျ့စားမှုတှဟော နစေ့ဉျဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈတယျဆိုတာကို လကျခံပါ။
ငွငျးပယျခံရမှုတှေ၊ လုပျငနျးအတှငျး ခကျခဲကွမျးတမျးမှုတှေ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောပွီး သူမြားမလြှောကျလမျးကို လြှောကျလှမျးရတာက တကယျကို ခကျခဲကွမျးတမျးပါတယျ။ သငျ့အိပျမကျ၊ သငျ့ရညျမှနျးခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျစိတျ နညျးနညျးပဲရှိမယျဆိုရငျ အခကျအခဲတှနေညျး ကွီးထှားလာမှာမဟုတျပါဘူး။ ရငျးနှီးစှနျ့စားမှုတှေ လုပျဆောငျရတဲ့အခါမှာလညျး အဆငျမပွမှေုတှေ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆငျမပွမှေုတှကေ ထာဝရရှိနမှောမဟုတျပါဘူး။ လကျလြှော့အရှုံးပေးလိုကျတဲ့အခါမှာသာ အဆငျမပွမှေုက အမွဲတညျတံ့နမှောဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရငျးနှီးစှနျ့စားမှုတှကေို သိပျအမြားကွီးတှေးမနပေဲ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
၃။ တကယျလို့ ဆိုတာတှကွေောငျ့ ရပျတနျ့မသှားပါစနေဲ့။
တကယျလို့ ငါ ကိုယျအလေးခြိနျမကရြငျ
တကယျလို့ ငါ လုပျငနျး မအောငျမွငျရငျ
တကယျလို့ ငါ ခဈြသလို သူမက ပွနျမခဈြဘူးဆိုရငျ
တကယျလို့ ငါ စာအရေးအသား မကောငျးဘူးဆိုရငျ
တကယျလို့ ငါ့ စိတျကူးအိပျမကျတှေ မရှငျသနျလာဘူးဆိုရငျ
ဒီလိုအတှေးတှကေ သငျ့ရဲ့ခေါငျးထဲကို အခြိနျမရှေးဝငျလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလို သံသယတှကေ ကြှနျတျောတို့နဲ့အခြိနျတိုငျး အတူရှိနတောဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျပွီး Comfort zone အတှငျးကနေ ရုနျးထှကျကွတဲ့အခါမှာ ပိုတှေးမိတတျကွပါတယျ။ ဒီလို အတှေးတှကွေောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိမျမကျတှေ ပကျြစီးမခံလိုကျပါနဲ့။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အတှေးတှေ တှေးပေးပါ။
၄။ ဘာအကွောငျးပဲရှိရှိ ရှဆေ့ကျပါ။
တဈခါတဈလမှော သငျရယူပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့အရာက ဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျတော့သလို ခံစားလာရတတျပါတယျ။ ပေါကျတတျကရတှဖွေဈပွီး အဆငျမပွမှေုတှေ ကွုံလာတတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှကေလညျး သငျ့ကို ရူးနပွေီလို့ ပွောလာကွပါလိမျ့မယျ။ ဘာကို ဂရုစိုကျမလဲ ? တကယျဆိုရငျ ဒါဟာ သငျ့ဘ၀ဖွဈပါတယျ။ သငျနဲ့ပဲ သကျဆိုငျပါတယျ။ သငျဘယျနှဈကွိမျပဲ နောကျကောကျကြ ကနျြနခေဲ့ပါစေ၊ အိပျမကျပနျးတိုငျကို လှမျးကိုငျနိုငျဖို့ အလုပျ(၃)ခုလောကျ လုပျနရေပါစေ။ အရှုံးမပေးလိုကျပါနဲ့။ ကဆြုံးပွိုလဲမှုတှကေို အောငျမွငျမှုတှေ အဖွဈပွောငျးလဲနိုငျတဲ့အထိ ကွိုးစားပါ။ စိုးရိမျမှုတှေ၊ သံသယတှေ မထားပါနဲ့။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိပျမကျတှကေ ဘယျတော့မှ ပြောကျကှယျမသှားပါဘူး။ လဈလြူရှုဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပဲ ရှိတာပါ။
၅။ အတိတျကအရိပျတှရေဲ့ လှမျးမိုမှု မခံရပါစနေဲ့။
နောငျတတရားဟာ ဆိုးကြိုးပေးတဲ့ ခံစားမှုတဈခုသာဖွဈပါတယျ။ တကယျဆိုရငျ ကမ်ဘာမှာ အဆိုးရှားဆုံး စိတျခံစားမှုလို့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။ ကုရာနတ်ထိဆေးမရှိတဲ့ ရောဂါတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ တဈခုခုကို ကွိုးစားလုပျဆောငျတော့မယျ ဆိုတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ အရငျက ဘာဖွဈခဲ့ဖူးတယျ၊ အခုရောမဖွဈနိုငျဘူး လားဆိုပွီး လာသတိပေးနတောက နောငျတပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကို လကျရှိအခြိနျကနေ ဆှဲထုတျပွီး အတိတျမှာပဲ နဈမြောနအေောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈပါစေ။ ပွီးခဲ့တဲ့အတိတျဆိုတာ ပွနျပွငျဆငျလို့ မရတော့ပါဘူး။ အနာဂတျကိုပဲ ပုံသှငျးလို့ ရတယျဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယျ။
သငျ့ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျက သငျကိုယျတိုငျပဲဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာလောကကွီးထဲမှာ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မဖွဈသေးတာပဲ ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခှငျ့အလမျးတှကေို အခုခကျြခငျြးပဲ ရယူပါ။ မနကျဖွနျအထိ စောငျ့မနပေါနဲ့။
Previous: အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေမည့် နည်းလမ်းများ
Next: အချိန်ပြည့် စိတ်အားတက်ကြွနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု